Sida loo soo biir Files mod
> Resource > Video > mod Joiner: Sida loo soo biir Files mod
Haddii aad fiidiyo laayey videos qaab mod, waxaa dhici karta inaad qabto weyn badan mod video clips ku saabsan daqiiqado macaan ee noloshaada. Waa hagaag, ayaa aad waligaa fikrad aad u fiican si ay ugu biiraan oo dhan faahfaahinta noloshaada in la abuuro wax la mid ah documentary video weyn? Haddii ay sidaas tahay, waxaad u baahan tahay inuu ku biiro files mod muuqan.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac) waa awood leh mod joiner, taas oo ka dhigi kara sahlan oo dhakhso ah si ay ugu biiraan laba ama dhowr files mod galay mid ka mid weyn. Oo weliba, waxa uu siiyaa badan oo muuqaalada tafatirka qabow sida abuurka, falinjeeerka, darto saamaynta kala duwan iyo watermarks Iyada oo iwm, si aad u samayn kartaa video Abuur qabow ka files mod. Weligiisba dhig xasuusta macaan.
Fiiro gaar ah: Inta aanad samayn, waxaad u baahan tahay in aan caddeeyo waxa soo saarka habka aad rabto in aad badbaadin weyn ee file, video ama DVD? Haddii aad rabto in aad ku biiri dhammaan faylasha mod kaliya DVD cusub, waxaad baran kartaa sida loo gubi mod in DVD . Si qaso files mod galay video weyn, fadlan raac tilmaan-hoose.
1 files Import mod in this joiner mod
Ka dib marka aad galaan "Beddelaan" interface by default, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan aad files mod galay app this. Si aad u sameyso, waxaad ka dhacay kartaa "Add Files" button on dhinaca kore ee bidix xitaa your computer iyo dajiyaan oo dhan files mod aad rabto in aad wada biiro. Ama si toos ah jiidi oo dhan oo iyaga ka mid in ay leeg- this app ee.
2 Ku biir Files mod
Marka hore, habayno oo dhan ee ku daray files mod sida ay si play by fudud jiitaa-iyo-hoos u. Ka dib markii in, sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" ikhtiyaarka ugu hooseysa. Hadda aad ku biireen aad files mod muuqan.
3 Dooro qaab wax soo saarka ah oo loogu badalo video
Hit qaab icon dhinaca midig ee interface ugu weyn. Isla markiiba, suuqa kala qaab wax soo saarka ah oo la tusay doonaa hore ee indhahaaga. Halkan, waxaad dooran kartaa qaab video aad rabto in aad badbaadin file weyn wax. Ka dib markii in, kaliya riix "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface ugu weyn ee ay u dhoofiyaan aad video abuurka.